ကနေဒါနိုင်ငံ၏ ငွေဖောင်းပွမှုအခြေအနေဒေတာသည် Forexထရိတ်ဒါများအတွက် အလွန်အရေးကြီးသည့်ဒေတာတစ်ခု ဖြစ်ပါသည်. CPIဒေတာများသည် ယခုနှစ်နောက်တစ်ကြိမ်အတိုးနှုန်းတင်ရန်အတွက် အရေးကြီးသည့် ဒေတာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်. ကနေဒါဗဟိုဘဏ် အနေနှင့် ယခုထွက်ရှိမည့်ဒေတာများ ဆက်လက်ကောင်းမွန်နေပါက ဘဏ်အတိုးနှုန်းတင်မည့်အလားအလာရှိနေဦးမည်ဟု မျှော်လင့်ရပါသည်.
ကနေဒါ၏ နှစ်စဉ်ငွေဖောင်းပွမှုဒေတာမှာ ဇွန်လတွင် ၁. ၀% ရှိခဲ့ရာမှ ဇူလိူင်လတွင်မူ ၁. ၂%အထိ မြင့်တက်လာခဲ့ပါသည်. ထို့ကြောင့် ကနေဒါဗဟိုဘဏ်သည် ၇နှစ်တာကာလအတွင်း ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ် အတိုးနှုန်းမြှင့်တင်ခဲ့ပါသည်. ယခုထုတ်ပြန်မည့် CPIဒေတာသည် ဈေးကွက်ကခန့်မှန်းထားသည့် ပမာဏထက် ကျော်လွန်ခဲ့ပါက CADတန်ဖိုးမြင့်တက်လာမည်ဖြစ်ပြီး ဒေတာကျဆင်းခဲ့ပါက ကနေဒါဒေါ်လာတန်ဖိုး ကျဆင်းသွားနိုင်ပါသည်.
လက်လီအရောင်းဒေတာကို စက်တင်ဘာ ၂၂ရက် ၁၅:၃၀ MTအချိန်တွင် ထုတ်ပြန်ပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်. နောက်ဆုံးထုတ်ပြန်ခဲ့သည့်ဒေတာသည် သုံးလဆက်တိုက်မြင့်တက်လာခဲ့ပြီးနောက် ဇွန်လတွင်လည်း ဆက်လက်ကောင်းမွန်ခဲ့ပါသည်. ယခုဒေတာသည် အတိုးနှုန်းအတွက်အရေးကြီးရုံသာမက နိုင်ငံငွေလဲနှုန်းအတွက်ပါ အလွန်အရေးကြီးသည့်ဒေတာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်.